Alex Oxlade-Chamberlain oo qarka u saran in uu Arsenal ka tago - BBC News Somali
Alex Oxlade-Chamberlain oo qarka u saran in uu Arsenal ka tago
Image caption Alex Oxlade-Chamberlain
Ciyaaryahanka khadka dhexe uga dheela Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain ayaa qarka u saran in uu ku biiro kooxda Chelsea ee difaaacanaysa Horyaalka Ingiriiska ee Premier League.
Oxlade-Chamberlain, oo 24 jir ah ayuu qandaraaskiisu ku eg yahay xagaaga soo socda, wuxuuna diiday in uu sixiixo qandaraas cusub si uu u sii joogo garoonka Emirates Stadium.
Kooxda Chelsea ayaa ka gaabsatay in ay ka hadasho arrintan, laakiin waxaa la fahamsan yahay in ay heshiiyeen kooxda ay xifaaltamaan ee ay London ka wada dhisan yihiin si ay ula soo wareegaan ciyaaryahankan reer England.
Liverpool ayaa iyadana la ogyahay in ay danaynaysay ciyaaryahankan horay ugu soo dheeli jiray Southampton, haddana waxaa laga yabaa in ay dadaal samayso si ay ula soo wareegto.
Oxlade-Chamberlain ayaa saftay ciyaar kaste oo ay xilli ciyaareedkan dheeshay Arsenal, waxaana ka mid ahayd midii Axaddii ay Liverpool ku gacan saraysay ee 4-0 ku soo dhamaatay, inkastoo Alex la badalay ciyaarta oo dhammaanin.
Wenger: Arsenal niyad ahaan ayay u burburtay
Wenger: "Waan ka qoomamooday" in aan riixay Anthony Taylor
Muxuu yahay dhibkan Arsenal haysta hadduu Sanchez joogo iyo haddii kalaba?
Haddii ay Chelsea soo sixiixato ciyaaryahankan khadka dhexe wuxuu noqon doonaa midkii shanaad ee muhiim ah, waxaana ka sii horreeyay weerar yahan Alvaro Morata, gool haye Willy Caballero, difaac Antonio Rudiger iyo Tiemoue Bakayoko oo khadka dhexe ka dheela.